दसैँ लाग्यो- कस्तो मासु खाने, कस्तो नखाने ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य दसैँ लाग्यो- कस्तो मासु खाने, कस्तो नखाने ?
२०७८, २४ आश्विन आईतवार १६:१९
दसैँ सुरु भएसँगै नेपालीको घरघरमा खसी, बोका, राँगाजस्ता रातो मासु हुने जनावरको मासु बढी प्रयोग हुने गर्दछ । चिकित्सकले भने रातो मासु पोलेर, भुटेर अधिक बोसो भएको प्रयोग नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
Previous articleचन्दा नदिएपछि विप्लवको नाममा कार्यकक्षमै दुर्व्यवहार
Next articleएमाले १० औं महाधिवेशन : केपी र घनश्यामबीच प्रतिस्पर्धा